आम नगरबासी नै काँग्रेसप्रति उत्साहित छन्– भट्ट « Anumodan National Daily
आम नगरबासी नै काँग्रेसप्रति उत्साहित छन्– भट्ट
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७४, आईतवार १३:४४
२५ वर्षदेखि अनवरत नेपाली काँग्रेसमा क्रियाशील वीरेन्द्र भट्टलाई काँग्रेसले गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदको उम्मेवार चयन गरेको छ । २०२५ सालमा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा जन्मिएका नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भट्ट २०४९ सालमा काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्य भएका थिए । उनले काँग्रेसको क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सदस्य र जिल्ला संगठन विभाग प्रमुखको कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहेका गोदावरी नगरपालिकामा काँग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार भट्ट आफू र पुरै टिम विजयी हुनेमा ढुक्क छन् ।
नगरपालिकाका विभिन्न वडामा उम्मेदवार तथा नेताकार्यकर्तासहित घरदैलोमा व्यस्त रहेका मेयर पदका उम्मेदवार भट्टसंग अनुमोदनका लागि संवाददाता शेरबहादुर ऐरले शनिबार अत्तरियामा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– तपाईंलाई तपाईंको पार्टी नेपाली काँग्रेसले गोदावरी नगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ । कस्तो महसुस भइरहेको ?
मेरो पार्टीले मलाई यो जिम्मेवारी दिँदा स्वाभाविक रूपमा खुशी लागेको छ, तर संगसंगै जिम्मेवारी थपिएको महसुस भइरहेको छ । हिजोसम्म पार्टीका धेरै साथीहरू यो (टिकट) को दौडमा थियौं । पार्टीले मलाई यो अभिभारा सुम्पेको छ । र, मैले पार्टीले सुम्पेको यो अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने छ । टिकट पाउनु भएका वा कुनै कारणले पाउन नसक्नु भएका सबै साथीहरूलाई एकजुट बनाएर तथा सबैबीच अटुट विश्वासको वातावारण बनाएर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउनुपर्ने प्रमुख अभिभारा छ ।
– विजय हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त ?
हामी मतदातामाझ पुग्दा नेपाली काँग्रेसलेनै प्रजातन्त्रको स्थापना गरेकाले नेपाली काँग्रेस हारे प्रजातन्त्रनै हार्छ भन्ने जनताको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । पार्टीका नेताकार्यकर्ता मात्रै होइनन्, आम नगरबासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू पनि उत्साहका साथ काँग्रेसलाई विजयी गराउन लागेको देखेर म त गोदावरी नगरपालिकामा काँग्रेसले जित्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।
– पार्टीभित्रै असन्तुष्टी छैनन् र ?
हो, हिजोसम्म मेयर, उपमेयरका धेरैं आकांक्षी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाएपछि आकांक्षी सबै साथीहरू एकजुट भएर व्यापक प्रचारप्रसारमा जुट्नु भएको छ । पार्टीले टिकटको टुंगो लगाएपछि सबै असन्तुष्टिहरू समाप्त भएको मैले महसुस गरेको छु ।
– प्रचारप्रसार कस्तो हुँदै छ नि ?
गोदावरी नगरपालिकाका सबै वडा तथा टोलवस्तीमा हाम्रो पार्टीको नगर कमिटिको नेतृत्वमा प्रचारप्रसार अभियानलाई तीब्र बनाइएको छ । हामी दिनरात मतदाताको घरघरमा गएर पार्टीको विकासका एजेण्डा, पार्टीको घोषणापत्रबारे जानकारी गराइरहेका छौं । काँग्रेसले चुनाव जित्दा के उपलब्धी हुन्छ ? विकासको गति कस्तो हुन्छ भनेर सम्झाइरहेका छौं । मतदाताहरू पनि निकै उत्साहपूर्वक काँग्रेसका कुरा सुनिराख्नु भएको छ । हामी आम मतदातामाझ घरदैलो अभियान गइरहँदा स्थानीयको एउटै माग हुने गरेको छ– ‘पूर्वाधार विकास हुनुपर्‍यो ।’ व्यक्तिगत रूपमा आम मतदाताले मलाई ‘तपाई नगरको तीब्र विकास गर्नसक्ने सक्षम उम्मेदवार हो’ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ । हामी निकै उत्साहित छौं ।
– तपाईंहरूका विकासको एजेण्डा के–के हुन् त ?
अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गरौं । म नगर विकासको अध्यक्ष हुँदा साविक अत्तरिया नगरपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना बनाए । विज्ञहरूसंग सल्लाह लिएर अस्पताल कहाँ स्थापना गर्ने, क्याम्पस कहाँ राख्ने ? जस्ता योजना बनाए । हामीले त्यतिबेला अस्पताल निर्माण र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको स्तरोन्नतीका लागि पहल गर्‍यौं । यो नगरपालिकाको मुख्य समस्या नदी कटान हो । वर्षौदेखि स्थानीयले नदीकटानको ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन् । यसका लागि हामीले नगरको गुरुयोजना बनाउछौं । यससंगै नगरपालिकामा शाखा सडकहरू पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, ठूलो अस्पताल नहँुदा यहाँका जनताले स्वास्थ्य सेवा लिन धनगढी, महेन्द्रनगर तथा भारतका विभिन्न शहरका अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, बेरोजगारीको ठूलो समस्या छ । हाम्रो प्राथमिकता यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि हुने छ । एक लाइनमा भन्दा मैले स्थानीय जनताको चाहना र भावनाअनुसार नै काम गर्नेछु । उहाँहरूको समस्यालाई मैले मेरो समस्या हो भनेर काम गर्नेछु ।
– अन्त्यमा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म आम नगरबासी दिदीबहिनी, दाजभाइलाई बिनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु– ‘काँग्रेसलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनु होस् ।’ काँग्रेस तपाईंको हरेक सुखदु:खमा साथमा रहेको छ र रहने छ । हामी प्रदेश नम्बर ७ को प्रवेशद्वार रहेको गोदावरी नगरपालिकालाई मुलुककै नमुना र समृद्ध नगरपालिका बनाउने छौं ।